Tsy hain'i Apple intsony ny fomba "mampifandray" ny mpanjifa amin'ny Apple Arcade ary manome serivisy mandritra ny herintaona | Avy amin'ny mac aho
Tsy hain'i Apple intsony ny "manantona" mpanjifa ho an'ny Apple Arcade ary manome herintaona amin'ny serivisy
Tsy hain'izy ireo intsony ao amin'ny Apple ny fomba ahazoan'ny mpanjifa misoratra anarana na mampiasa ny serivisy lalao streaming Apple Arcade. ankehitriny ny orinasa Cupertino miaraka amin'ny mpandraharaha Verizon Vao avy nanampy serivisy maimaimpoana iray taona ho an'ireo mpanjifa manana drafitra voafaritra voafaritra izy ireo.
Mazava ho azy fa tsy nahomby fotsiny i Abel Arkade ary hita izany amin'ny isa na dia ampian'i Apple ao anaty fonosana Apple One aza izy io, ho serivisy iray hafa azon'ny mpampiasa ampiasaina. Mazava ho azy, ary raha miresaka manokana momba ny Apple Arcade aho dia nahazo maimaim-poana nandritra ny telo volana ary lalao iray monja no nanandramako, tsy afaka mandresy lahatra ny tenako aho ... Ity dia zavatra tsy mitranga amiko irery, Fantatro ireo mpampiasa maro izay tsy nampiasa akory ity serivisy lalao an-tserasera Apple ity afaka telo volana.
Apple Arcade dia mbola tsy nesorina ary te hanery azy ny orinasa
Tahaka izay mitranga amin'ny serivisy video streaming Apple TV +, avy amin'ny Apple dia irian'izy ireo hanala kely kokoa ny Arcade ary ho maro ny mpampiasa hiafara amin'ny fampiasana an'ity lalao ity. Iray amin'ireo fomba mora indrindra hampitomboana ny fampiasana ny fitantanana azy maimaim-poana.
Amin'ity tranga ity, ny mpampiasa ny mpandraharaha Verizon sy ny mpanjifa vaovao dia voafidy hahazo sixApple Arcade‌ enim-bolana na Google Play Pass maimaimpoana miaraka amin'izay drafitra tsy voafetra izay manome sonia na 12 volana ‌Apple Arcade‌ na Google Play Pass miaraka amin'ny «Play More» Na ny "Get More" izay drafitra manokana kokoa ho an'ireo izay te hilalao. Na inona na inona fanandramana hampiroborobo ity serivisin'i Apple ity Mahery izy io ary antenaina fa amin'ity hetsika ity dia hitombo ny tolotra amin'ny mpampiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Tsy hain'i Apple intsony ny "manantona" mpanjifa ho an'ny Apple Arcade ary manome herintaona amin'ny serivisy